Mampiato sa mampiato ny varotrao ny teknolojia? | Martech Zone
Mampiato sa mampiato ny varotrao ve ny teknolojia?
Alatsinainy, Novambra 10, 2008 Alakamisy, Jona 11, 2015 Douglas Karr
Niasa tao amin'ny Software ho serivisy nandritra ny folo taona lasa, ny ankamaroan'ny lazany dia avy amin'ny orinasa iray tsy mila miasa amin'ny alàlan'ny departemantan'ny IT ao aminy. “Raha mbola tsy mila miresaka amin'ny bandy TI-nay!", Dia mantra henoko matetika,"Sahirana ry zareo!".
Ny fangatahana tsirairay dia atao amin'ny alàlan'ny dingana anatiny ary avy eo nihaona tamin'ny 482 antony nahatonga izany tsy afaka vita. Mahatsikaiky fa ireto no bandy mitovy ihany no tena mahazo sosotra rehefa mijery ivelany ny vahaolana!
Mampametra-panontaniana ihany, ny sampan-draharahan'ny informatikao ve dia ahafahan'ny ezakareo mivarotra sa tsia? Raha Tale IT ianao dia miasa isan'andro manampy ny mpanjifanao sa mandà azy ireo tsotra izao?
Raha ny valiny roa no farany, dia fironana manakorontana izay inoako fa mitombo. Mihabetsaka ny mpivarotra fantatro leo miaraka amin'ny departemantan'ny IT. Tamin'ny orinasa iray niasako (izay nampiantrano mpizara tranonkala am-polony), nivoaka tokoa izahay ary nividy fonosana fampiantranoana ivelany.
Tonga ny fotoana hiovana! Tokony miasa ny departemantanao IT amin'ny ianao Tadiavo ny teknolojia ilaina hitantanana ny orinasanao.
Ity misy lahatsoratra tsara iray avy Hugh MacLeod momba ilay lohahevitra:
Mizara ny tsy fahombiazako (sy ny fahombiazako?)
Manome ny sasany, misy manome rehetra. Misaotra.
10 Novambra 2008 à 9:40
Nahafinaritra ahy ny fampandehanana ny teknolojia sy ny asa ho an'ny fanombohana maromaro. Fanombohana mitombo haingana be miaraka amin'ny filàna ara-barotra lehibe. Raha tsy noho ny fiaraha-miasa eo amin'ny ekipa teknolojia, ops, marketing, ary biz dev…
Mila tontosa ny fiaraha-miasa ary mila ifampizarana ihany koa ny HARENA. Ny antony mahatonga ny be dia be amin'ny IT hanome anao ratsy be dia be dia toy izao manaraka izao (farafaharatsiny raha ny traikefako):
1. Ny ankamaroan'ny teti-bolan'ny teknolojia dia tena tery. Zara raha misy toerana azo iainana. Mitondra zavatra hafa handaniana loharanon-karena ianao, saingy TSY MAINTSY mitondra na inona na inona eo ambony latabatra ianao fa ny fangatahana, tsy miasa ho ekipa ianao ary manimba ny orinasa ny fitiavam-bola. Mila zavatra ianao - aloavy izany. Tsy maimaim-poana ny loharanom-baovao.
2. Tsy adala ny olona IT. Raha raisinao toy izany izy ireo dia hamaly izany. Izany no fiainana. Tombontsoa tsara indrindra ho an'ny orinasa ny fampiasanao ny fotoana mba hahazoana antoka fa azon'ny olona informatika tanteraka ny fiantraikan'ny tetikasanao. Mangataha fidirana dia hahazo fiaraha-miasa ianao.
Ny teknôlôjia fandraharahana no fototry ny famokarana sy ny fahombiazan'ny mpiasa. Ny fitondrana azy na inona na inona latsaka noho izany dia fitsarana ratsy.
Ary farany, ny tetik'asa teknolojia izay toa tsotra ho an'ny tsy teknisiana dia matetika tena sarotra tanterahina. Ary ny tetikasa sarotra dia mety manana vahaolana tena mora. Miaraha miasa amin'ny ekipanao. Raha misafidy ny hamorona silos ianao, dia tsy tokony hanantena ny vokatra ratsy ianao.
Tokony hisy olona iray avy amin'ny IT anao isaky ny fivoriana ara-barotra. Izay no ilazako foana.
Ny haba 2 fotsiny.
11 Novambra 2008 à 12:37
Apollo, raha miombon-kevitra amin'izay rehetra nolazainao aho dia tsy heveriko fa ny fanjohian-kevitra dia manamarina ny tsy fahampian'ny IT. Ny lava sy ny fohy amin'izany dia tonga amin'ny tanjona ara-barotra. Ny IT dia tokony hifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasa farany fa tsy momba ny IT fa momba ny orinasa.
Raha ny momba ny IT tsy adala ka tsy tokony horaisina toy izany dia manaiky aho. Andraikitry ny mpitarika informatika indray anefa ny manova ny endriky ny sampana misy azy ary manao izay tsy hiverenan'ny vahoakany amin'ny fitondran-tena ratsy.
Ilaina ny fitarihana marina amin'ny IT mba hahatonga ny departemanta IT tsara. Ny mpitarika dia tsy maintsy miala amin'ny andraikitry ny "Guru teknolojia aho" ary mametraka ny "Ahoana no ahafahan'ny IT manampy anao androany?" satroka. Satria fotsiny hoe tokony handray anjara amin'ny fivoriana ny IT dia tsy midika izany fa ho lasa ianao raha tsy mandresy ny lanjan'ny IT ary manova ny fomba fijerin'ny IT.
Anjaran'ny mpitarika IT ny manao ny sampan-draharahan'ny IT ary midika izany fa manova ny fomba fanaovana IT sy ny momba ny IT. Ny IT dia tsy momba ny teknolojia fa momba ny fandraharahana sy ny fanatanterahana ny raharaham-barotra.
10 Novambra 2008 à 11:09
Araka ny traikefako, ny Departemantan'ny IT dia nanakana ny ankamaroan'ny fizotran'ny varotra.
Marina ny anao… Fotoana hanovana izao!
11 Novambra 2008 à 12:24
Efa CIO ho an'ny orinasa iray izay tsy maintsy niara-niasa tamin'ny orinasa miliara dolara aho, dia efa niainako fa maro ny sampan-draharahan'ny IT no hitifitra zavatra fotsiny satria tsy te hiatrika izany izy ireo. Nandritra ny taona maro aho dia nilaza tamin'ny mpiasako, ny mpiara-mianatra tamiko ary ny lehibeko fa raha mila fanavaozana izy ireo dia tsy maintsy mpanentana fa tsy kilemaina!
Ho an'ny mpiasako dia nihaino ny fangatahana izany, raha nanapa-kevitra ny mpitantana fa tetikasa tsy maintsy atao izany - ataovy izany. Tsotra toy izany. Raha afaka manatsara dingana iray izy ireo mba hahatonga azy io ho mora kokoa, haingana kokoa ary tsy dia lafo loatra dia manolotra izany! Tadiavo ireo fahafahana ireo.
Ho an'ny namako dia midika izany fa tsy maintsy misokatra amin'ny hevitra avy any ivelan'ny faritry ny fahaizany izy ireo ary tsy maintsy vonona ny hanazava ny olany amin'ny teny azon'ny teknolojia sy fanampiana.
Ho an'ny lehibeko dia midika hoe mandray ny fiovana, mampiasa ary manome hery ny IT raha ilaina ary ny tena zava-dehibe dia ny mampifanaraka ny laharam-pahamehan'ny IT amin'ny tanjona ara-barotra toy ny fiantohana ny kalitao, ny fahombiazan'ny famokarana ary ny fanekena fa na dia tsy mpamokatra fidiram-bola aza ny IT dia afaka mitahiry vola bebe kokoa ny orinasa isan-taona. noho izay lany. Tsy voatery ho sarany fotsiny ny IT.
Satria fotsiny hoe “tsy tao anatin'ny tetibola” izany dia tsy fialan-tsiny tsara mba tsy hampiharana fandaharana fitsitsiana, fanatsarana ny fahombiazana. Midika izany fa tsy maintsy nanao laharam-pahamehana ny tetikasanay izahay ary nanosika zavatra hiverina.
12 Novambra 2008 à 11:25
Tsy ny IT-bandy ihany no mety hanakana ny ezaka ara-barotra amin'ny alàlan'ny teknolojia vaovao. Indraindray ianao dia nifanena tamin'ireo mpivarotra izay mety handà ny teknolojia vaovao, satria mety ho hitan'izy ireo ho fandrahonana ny anjara asany matihanina izany.
Mino aho fa izay rehetra tafiditra amin'ny varotra dia mila manitsy ny tenany amin'ny teknolojia vaovao marani-tsaina sy mahomby. Ireo izay tsy manao izany dia azo antoka fa miatrika fotoan-tsarotra kokoa noho ireo izay miatrika izany.
12 Novambra 2008 à 6:56
Mino aho fa nanana teny iray i Peter Drucker indray mandeha izay nanao hoe: "Inona no nitranga tamin'ny 'I' tao amin'ny IT?" Ny teknôlôjia no tena ifantohan'ny IT. Ny IT dia mahalana ny mpiasan'ny fampahalalana na fifandraisana, na ny olona hanamora ny fanavaozana IT. Raha tsorina, ny ankamaroan'ny departemanta IT dia tokony hovana anarana hoe "HelpDesk" na "Departemantan'ny mailaka".
12 Novambra 2008 à 11:07
Ary ny "Fanohanana an-telefaona", koa!
May 29, 2013 amin'ny 9: 12 AM
Peter Drucker dia nanoratra lahatsoratra lehibe 10 na taona lasa izay. Nilaza izy io fa natao Tompo sy Baron ny mpanonta nandritra ny revolisiona momba ny fampahalalam-baovao teo aloha satria diso hevitra izy ireo noho ny vaovao azo. Rehefa nandeha ny fotoana dia lasa vozon'akanjo manga kokoa izy ireo, hita ho teknisianina mihoatra noho ny tena mpamorona.
Orinasa maro no mitantana tsy nahy ataon'ny departemantan'ny IT-ny manapa-kevitra izay hatao voalohany.
Mivory indray mandeha isam-bolana, na isaky ny tapa-bolana mihitsy aza, ary ireo olona mitantana ny orinasa no tokony hametraka ny laharam-pahamehana. Avy eo dia lazao amin'ny rehetra, anisan'izany ny IT, inona izy ireo. Ataovy azo antoka fa vita ny zava-dehibe, ary, zava-dehibe koa, izay tsy ho vita amin'ity volana ity.
Raha avelanao ho laharam-pahamehana ny IT dia ataonao ho Tompo sy Baron izy ireo. Tokony homena lanja be izy ireo amin'ny fampandehanana sy fanohanana ny fahitan'ny orinasanao, fa ny tsy fanatanterahana ny laharam-pahamehana ho azy ireo, ary ny tsy fitenenana amin'ny mpampiasa izay tsy ho vita, dia tsy mahavita mitarika ny orinasanao.
May 29, 2013 amin'ny 10: 33 AM
Ekeko tanteraka, @facebook-1229758293:disqus!